चिकित्सकलाई कहिले नलुकाउनुस यस्ता कुरा, हुनेछ हानिकारक – tvNEPALI
चिकित्सकलाई कहिले नलुकाउनुस यस्ता कुरा, हुनेछ हानिकारक
Posted on २८ असार २०७५, बिहीबार १३:५१ July 12, 2018
चिकित्सकले कुनै उपचार सुरु गर्नुअघि बिमारीको स्वास्थ्य-इतिहास बुझ्न खोज्छन् । बिमारीलाई यसअघि के भएको थियो, कस्तो रोग लागेको थियो, त्यसको उपचार कसरी गरियो, के औषधी खुवाइयो आदि । यसबाट के थाहा हुन्छ भने, उनको रोगको जड के थियो ? त्यसको सही उपचार भयो वा भएन ? अब कसरी अगाडि बढ्न सकिन्छ ?
र, गर्भपात गर्ने चक्करमा जथाभावी औषधीको प्रयोग गर्न समेत हिच्किचाउँदैनन् । जबकी चिकित्सकको परामर्श विना सेवन गरिएको यस्ता औषधीले युवतीहरुमा जटिल समस्याहरु निस्किन सक्छ । उनीहरुको ज्यान समेत जान सक्छ । त्यसैले, यदी कसैमा यस्ता भएमा विना चिकित्सकलाई आˆनो सबै समस्या हुबहु बताउनु पर्छ
Posted in स्वास्थ्य/जीवनशैली Tagged चिकित्सक, हानिकारक
दुर्घटनामा परी २ जनाको मृत्यु